Odeessa. Naannoo B/Gumuz Kamashiitti lola guddaatuu deemsifamaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOdeessa. Naannoo B/Gumuz Kamashiitti lola guddaatuu deemsifamaa jira.
Odeessa: Naannoo B/Gumuz Kamashiitti lola guddaatuu deemsifamaa jira.
lolli kun kaleessa waaree booda ifatti eegale.
Lola kanarratti waraanni mootummaa kumaandoo warri jedhaman hedduun dhumaniiru.
kanneen madaa’an hedduunis uffanni waraanaa irraa baafamuun waraana akka ta’an himuu akka hin qabne ajajni itti kennamuun Hospitaala Riferaalaa Naqamtee ciisanii jiru.yeroo amma kana namoonni hedduun achitti yaalamaa jiran keessaa waraanni yaaliirra jiru tokko akka dhoksaan namaaf himetti humni guddaan Gumuzootaafi qaama biraarraa of ijaaree mootummaa lolaa jira. Lolli sunis haala adda ta’een kan geggeefamaa jirudha. Qaamni nu lole sun dandeettii waraanaa cimaafi leenjii lolaa hammayyaa’e waan qabu fakkaata jechuun dubbate.
Araarsoo Raggaasaa irraa
Daandiileen naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaa geessan cufamuu/sirriitti sakatta’amuu qabu. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti dhohinsa boombii qindeessaa jiru, gareen Amaaraan ijaarame tokko biyya alaa kanaa gidduu kana yakkoota gurguddoo Oromiyaa keessatti gaggeessuuf maallaqa doolaara kuma dhibba lamaa fi kuma kudha ja’a (216,000$) walitti qabee jira. Maallaqni kun hanga guyyaa kaleessatti kan walitti qabamedha. Kaleessa galgalaa kaasee garee sana keessaa block na taasisanii jiru, arguu hin danda’u. Maallaqni kan guuramaa ture karaa Viber. Maqaan garee sanaa “Amharan innetadeg” jedha. Goolessummaa kanas caasaa mootummaa fayyadamuun akka raaawwachuuf jiran walii galaniiru, bulchitootni naannoo Amaaraa dhimma kana sirriitti quba qabu, waliin hojjechaa jiru.
Tolawak G Amenu
Magaalaa Dambidoolloo keessatti haleellaan boombii humna risaatin waajjira dhaaba pp fi kuusaa meeshaa waraana irraatti fudhatameera Guutummaan guutuuttis gubatee jira!
Haati daa’imaa, ‘Abbaa-warraakeetu [Shanee] deggera’ jedhamuun, daa’ima ishee kan baatii saddeetii waliin, Konyaa Arsii Lixaa, Ona Adaabbaa keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.
Lolli duguuggaa sanyii Oromoo Walloo irratti, humnoota Naannoo Amaaraa fi Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan geggeeffamu jabaatee itti-fufuun, guyyoota sadan darban keessatti lubbuun Oromoota 45’nii olii gaaga’amuu, kanneen baay’inaan 30’tti tilmaamanis madaa’anii wal’aansa dhabanii jiraachuu.
Eebila 14, 2021 irraa qabuun hanga guyyaa har’aatti Oromoonni baay’inaan 10’nii ol ta’an, Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa, Ona Amuruu keessatti ajjeefamuu, kanneen baay’inni isaanii 100 olitti tilmaamamus haala rakkisaa keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.
RSWO – Eebila 20, 2021
‘Dire’ suffering continues in Ethiopia war, EU envoy says